Nagu saabsan | Shandong Dingtaisheng Makiinado Technology Co., Ltd.
DTS waxay fadhigeedu yahay Shiinaha, tii kahoreysay waxaa la aas aasay 2001. DTS waa mid kamid ah kuwa ugu saameynta badan ee waxsoosaarka waxsoosaarka nadiifinta cuntada iyo cabitaanka ee Aasiya.
Sannadkii 2010, shirkadda ayaa magaceeda u beddeshay DTS. Shirkaddu waxay ka kooban tahay aag guud oo dhan 1.7 milyan oo mitir murabac ah, xarunta guudna waxay ku taal Zhucheng, gobolka Shandong, waxay leedahay 160 shaqaale. DTS waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan sahayda ceyriinka, wax soo saarka R & D, qaabeynta habka, soosaarka iyo waxsoosaarka, kormeerka wax soo saarka ee dhammaaday, gaadiidka injineernimada iyo adeegga iibka kadib
Shirkaddu waxay leedahay CE, EAC, ASME, DOSH, MOM, KEA, SABER, CRN, CSA iyo shahaadooyin kale oo caalami ah oo aqoonyahanno ah. Alaabada It`s waxaa laga iibiyey in ka badan 35 dal iyo gobal, DTS-na waxay leedahay wakiilo iyo xafiiska iibka ee Indonesia, Malaysia, Saudi, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria iwm .. Iyada oo leh badeecooyin tayo sare leh iyo adeeg kaamil ah iibka kadib. , DTS waxay ku guuleysatay kalsoonida macaamiisha waxayna ilaalinaysaa xiriir xasiloon oo ku saabsan sahayda iyo baahida iyadoo in ka badan 130 magac caan ah gudaha iyo dibaddaba.
Naqshadeynta iyo Soo-saarista
Si aan u noqono astaanta hogaamineysa warshadaha nadiifinta ee cuntada iyo cabitaanka aduunka waa hadafka dadka DTS, waxaan soo aragnay karti iyo awood injineero farsamo, injineero naqshadeyn iyo injineero horumarineed ee softiweerka korontada, waa ujeedkeena iyo masuuliyadeena inaan siino macaamiisheena alaabada ugufiican. , adeegyada iyo jawiga shaqada. Waan jecel nahay waxaan sameyno, waana ognahay in qiimaheena ay kujirto ka caawinta macaamiisheenu inay abuuraan qiimo. Si loo daboolo baahiyaha macaamiisha kala duwan, waxaan sii wadeynaa hal-abuurnimo, si loo horumariyo loona qaabeeyo xalal habaysan oo macaamiisha loogu talagalay.
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah oo ay wadaan caqiido guud oo si joogto ah wax u barta una cusbooneysiisa. Kooxdayada khibradeeda hodanka ah, habdhaqanka shaqada ee taxaddarka leh iyo ruuxa aadka ufiican ayaa kasbanaya kalsoonida macaamiil badan, sidoo kale waa natiijada hogaamiyaasha fahmi kara, saadaalin kara, wadi kara baahida suuqa qorshooyinka lana shaqeyn kara kooxda si ay u hogaamiyaan hal-abuurnimo.
DTS waxaa ka go'an inay macaamiisha siiso qalabka ugu tayada wanaagsan, waxaan ognahay in hadii aan la helin taageero farsamo oo wanaagsan, xitaa dhibaato yar waxay sababi kartaa in dhamaan wax soosaarka otomaatiga ah uu joojiyo socodka. Sidaa darteed, waxaan si dhakhso leh uga jawaab celin karnaa oo aan xallin karnaa dhibaatooyinka marka aan macaamiisha siinno iibka ka hor, iibka iyo adeegyada iibka ka dib. Tani sidoo kale waa sababta ay DTS si adag u qabsan karto saamiga suuqa ugu weyn ee Shiinaha oo ay sii wadato koritaanka.
Fadlan runtii xor ayaad u tahay inaad noo soo dirto shuruudahaaga waxaanan kuugu jawaabi doonaa si dhakhso leh.
Waxaan helnay koox injineernimo xirfad leh oo kuugu adeegta baahiyahaaga oo faahfaahsan.
Shaybaarro aan lacag lahayn ayaa shakhsi ahaan loogu soo diri karaa si aad u fahamtid macluumaad intaa ka badan.
Dadaal lagu doonayo in lagu daboolo baahiyahaaga, fadlan runtii xor u noqo inaad nala soo xiriirto.
Waxaad noo soo diri kartaa emayl oo toos ayaad noola soo xiriiri kartaa.
Intaa waxaa dheer, waxaan soo dhaweyneynaa booqashooyinka warshadeenna ee adduunka oo dhan si aan ugu aqoonsanno ururkeenna.
Waxaan u hoggaansameynaa macaamilka 1aad, tayada sare ee 1aad, hagaajinta joogtada ah, faa'iidada wadaagga iyo mabaadi'da guuleysiga. Marka aan la shaqeyno macmiilka, waxaan siineynaa dukaameeyayaasha adeeg tayo sare leh.